2010-11-07 ~ Myanmar Express
အထက်မှာ ပြထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် (၃) ယောက်ကိုကြည့်ပါ။ မယုံမရှိပါနဲ့ အဲ့ဒါ အမျိုးတွေပါ။ ဝဲ ဖက်အစွန်က ဗိုလ်မင်းရောင်၊ အလယ်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ကျန်တစ်ယောက်ကတော့ ကင်မ် ပါ။ဗိုလ်မင်းရောင်ဗိုလ်မင်းရောင်ဆိုတာ နာမည်ကျော် “ရွှေလရောင်”ဘွဲ့ခံ မြို့လုလင် မြို့သူကြီး ဦးမင်းရောင် ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာသွေးစစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးချစ်စိတ် အလွန်းကြီးမားသူဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာဆန်ဆန်ယောင်ထုံးနဲ့ ချိတ်ပုဆိုး ကို အမြဲ ဝတ်ဆင်သူဖြစ်ပါတယ်။ တောင်တွင်းကြီးမြို့ မြောက်လက်နေ သူကြီးမျိုးရိုးဖြစ်သူ သွေးသောက်ဘွဲ့ရ ဦးမှူး၊ ဒေါ်ပိုတို့၏ သားဖြစ်ပါတယ်။ အဖရော အမိ ပါ မြန်မာစစ်စစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်မင်းရောင်၏မိခင် ဒေါ်ပိုမှာ ကိုင်းရွာသူဖြစ်ပါတယ်။ အချိတ်ပုဆိုးဝတ်၍ မြင်းစီးပါက အလွန်ကြည့်ကောင်းပြီး ကျားကျားရားရားရှိလှပါတယ်။ ဦးမင်းရောင်သည် စိတ်ထက်မြက်ပြီး ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ ဆောင်ရွက်တတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၂၄၇) ခုနှစ်၊ ခရစ် (၁၈၈၆) တွင် မန္တလေး နေပြည်တော်မှ နေလနှစ်ဆူ ပေါတော်မူသောအခါ အင်္ဂလိပ်များ အထက်မြန်မာပြည်ကို သိမ်းပိုက်စဉ် ဗိုလ်မင်းရောင်သည် သူ့ကျွန်အဖြစ် နွံနစ်မခံ၊ ကုလားဖြူတို့အား မကြည့်လိုသော ဇာတိမာန်နဲ့ လူသူ ၃၀၀၀-ခန့် စုပြီးလျှင် နယ်ချဲ့တို့ကို တော်လှန်ခဲ့ပါတယ်။ ဗြိတိသျှအစိုးရသည် ဗိုလ်မင်းရောင်ကို မဖမ်းနိုင်သရွေ့ တောင်တွင်းမြောက်လက် နယ်များကို ငြိမ်းချမ်းစွာ မအုပ်စိုးနိုင်ကြောင်း သိသဖြင့် ဗိုလ်မင်းရောင်ကို အသေဖြစ်စေ၊ အရှင်ဖြစ်စေ၊ ဖမ်းဆီးပေးနိုင်သူအား ဆုငွေ၁၀၀၀ိ/ ကျပ် ပေးမည်ဟု ကြေငြာခဲ့သေးပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် လေးတိုင်စင်ရွာ တိုက်ပွဲတွင် ရွှေလရောင်မှာ ပေါင်ကျည်ဆန်သင့်သော ဒဏ်ရာနှင့် အင်္ဂလိပ်တို့ တွေ့ရှိဖမ်းမိသွားရာ ဗိုလ်မင်းရောင် အား အင်္ဂလိပ်၏ သစ္စာခံရန်နှင့် သစ္စာခံက အသက်ချမ်းသာပေးမည်ဟု ဗြိတိသျှတို့က ဖြားယောင်းခဲ့သေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗိုလ်မင်းရောင်က သစ္စာမခံသည့်ပြင် ပြန်လည်တုံ့ပြန် ပြောဆိုခဲပါတယ်။ ““ငါဟာ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအပေါ် ဘယ်တော့မှ သစ္စာမဖောက်ဘူး၊ မင်းတို့ပေးတဲ့ရာထူးကို ငါ မလိုချင်ဘူး၊ မင်းတို့ ငါ့ကိုသတ်လိုက ခုချက်ချင်းပင် သတ်ပါ”” လို့ ပြောဆိုရာ အင်္ဂလိပ်တို့က ဗိုလ်မင်းရောင်ကို ခေါင်းဖြတ် သတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ထို့နောက် ဦးမင်းရောင်၏ ဦးခေါင်းပြတ်ကို နတ်မောက်မြို့ သိမ်တော်ကျောင်းတိုက်၏ တောင်ဘက် ကန်ဘောင်ရိုးရှိ ထနောင်းပင်တွင် ဆွဲထားကာ လူအများအား လာရောက် ကြည့်စေခဲ့ပါတယ်။ ကြက်သီးထရလောက်အောင် လေးစားရသော မြန်မာ့သမိုင်းဝင် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်မင်းရောင်၏ မြေး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဗိုလ်မင်းရောင်ရဲ့ တတိယမြောက် မျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်မင်းရောင်လိုပဲ မြန်မာ့သွေးစစ်စစ်ဖြစ်ပြီး ဗိုလ်မင်းရောင်လိုပဲ မျိုးချစ်စိတ် ကြီးမားသူဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်မင်းရောင်လိုပဲ မိဘ နှစ်ပါးလုံးက မြန်မာစစ်စစ်တွေဖြစ်ပြီး အဖမှာ ဦးဖာ၊ အမိမှာ ဒေါ်စု ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအလည်ပိုင်း နတ်မောက် မြို့မှာ မွေးပြီး နက်မောက်နဲ့ ရေနံချောင်းတို့မှာ ပညာသင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဗြိတိသျှတို့ကို သခင်တို့က တော်လှန်ပုန်ကန်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရာမှာ သူ့အဘိုးလိုပဲ ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ခံခဲ့ရာမှ သူသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လှည့်လည်ပုန်းရှောင်နေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ ပထမတွင် သူသည် တရုတ်ပြည်သို့သွား၍ ကွန်မြူနစ်တရုတ်များထံ အကူအညီတောင်းရန် ရည်ရွယ်သော်လည်း ဂျပန်စစ်တပ်မှ ပြည်သိမ်းတပ်များက သူ့အား အမွိုင်မြို့တွင် ကြားဖြတ်တားဆီးပြီး ဂျပန်ပြည်သို့သာ သွားရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ ဗမာ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက်မြို့ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရာထူးကို ရယူခဲ့ပြီး ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အစ်ကိုဖြစ်သူမှာ ဦးဘဝင်းဖြစ်ပြီး ညီကို နှစ်ယောက်လုံး နိုင်ငံအတွက် အများကြီး အကျိုးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၉ ရက်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အတူ သူ၏ အစ်ကို ဦးဘဝင်း အပါအဝင် အသစ်ဖွဲ့စည်းထားသော ကက်ဘိနက်ဝန်ကြီး ခြောက်ဦးတို့နှင့်အတူ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ် ခံခဲ့ကြရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာလူမျိုးကို အလွန်ချစ်မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားပြီး ကျေလက်သူ ကျေးလက်သား ဖြစ်ရတာကို ဂုဏ်ယူနေသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူရိယ မဂ္ဂဇင်းတွင် အညာသားလေး ဆိုတဲ့ ကလောင်နာမည်နှင့် စာတွေရေးသားခဲပါသေးတယ်။ဗိုလ်မင်းရောင်၏ မြေး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ မြေး ကင်မ်ဗိုလ်မင်းရောင်ရဲ့ ဆဌမ မျိုးဆက် ကတော့ ကင်မ် လို့ခေါ်တဲ့ ကပြား ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့သွေးစစ်စစ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အမေက မြန်မာသွေးစစ်စစ်ပေမယ့် အဖေက တိုင်းတပါးသား မိုက်ကယ်အဲရစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် အဘီဖြစ်သူ ဗိုလ်မင်းရောင်ကို လုပ်ကြံခဲ့သည့် ဗြိတိသျှတို့ နေထိုင်ရာ လန်ဒန်မြို့မှာ မွေးခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ မွေးခဲ့တာ မဟုတ်သလို မြန်မာပြည်မှာလဲ မနေဖူးပါဘူး။ မြန်မာပြည်အတွက်လည်း ဘာမှမလုပ်ပေးဖူးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မြန်မာအတိုက်အခံတို့က သူ့ကို ချစ်ခင်လေးစားကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်မှန်းတော့ မသိပါဘူး။ သူ့မှာလည်း အစ်ကို တစ်ယောက်ရှိပြီး နာမည်ကတော့ အလက်ဇန္ဒားဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မ်ရဲ့ မြေးဖြစ်သူ ကျရင်တော့ ဗိုလ်မင်းရောင်တို့၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့နဲ့ အမျိုးတော်ကြောင်း ပြနိုင်ကောင်းပါရဲ့။ 6G မှာတောင် ဓာတ်ပုံချင်းယှဉ်ကြည့်လို့ ဒီလောက်ကွဲနေရင် 8G ကျရင်တော့ ဘာပုံတွေထွက်လာအုံးမယ်မသိ။
အနိုင်ရ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည် စာရင်း
ထူးခြားဖြစ်စဉ် တခုခုကြားရပြီဆိုရင် မိတ်ဆွေများက ဖုန်းဆက်ပြီး ဘာထူးလဲလို့ အမြဲမေးတတ်ကြတယ်။ အိမ်မှာက ဂျာနယ်တိုက်ပေါင်းစုံက လူတွေ၊ စာပေလောကသားတွေ၊ နိုင်ငံခြားသား သတင်းထောက်တွေ နေ့စဉ်အဝင်အထွက်များသလို ကျောင်းသူကျောင်းသား လူငယ်လူရွယ်တွေလည်း အလာများတာကြောင့် သတင်းစုံ ရပ်ကွက်အဖြစ် သဘောထားပြီး မေးကြတာဖြစ်တယ်။စာဖတ်သူများရဲ့ကျေးဇူးဟုတ်သလောက်လည်း ဟုတ်ပါတယ်။ အိမ်ထဲကအိမ်ပြင် မထွက်နိုင်တဲ့သူ ဖြစ်ပေမယ့် လူပေါင်းစုံ ဝင်ထွက် သွားလာနေတာကြောင့် သတင်းတွေနဲ့ အဆက်သိပ်မပြတ်ဘူး။ သတင်းတွေနဲ့ အဆက်မပြတ်တော့ ခေတ်ကိုမျက်ခြည်မပြတ်ဘူး။ မေတ္တာနဲ့ လာရောက်ကြသူတွေကို ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ ‘နီးရာနက’ တွေအပြင် စာဖတ်သူများရဲ့ ကျေးဇူးတွေလည်း မကင်းပါဘူး။မြန်မာပြည် အနှံ့အပြားက စာနဲ့ရေးသူက ရေး၊ ဖုန်းဆက်သူကဆက်ပြီး သတင်းစကားမျိုးစုံ ပါးတတ်ကြတယ်။ အဲဒီကျေးဇူးတွေကြောင့် ဒါလောက်အများကြီး စာတွေ ရေးနိုင်နေတာပါ။ အတော်များများက ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းပေါင်းစုံမှာ စာတွေအများကြီး ရေးနေနိုင်တာကို တအံ့တသြ ဖြစ်ကြတယ်။ မိတ်ဆွေများနဲ့ စာဖတ်သူများရဲ့ ကောင်းမှုကြောင့် ဒီလို ရေးနေနိုင်တာပါလို့ ပြန်ပြောရပါတယ်။ဘကြီးမိုးရဲ့စကားဒီအကြောင်းပြောတော့ ဘကြီးမိုးလို့ လူသိများတဲ့ သူငယ်ချင်းကြီး မောင်မိုးသူ ပြောလေ့ပြောထရှိတဲ့စကားကို သွားသတိရမိတယ်။ ဒေါ်ဒေါ် (လူထုအမေမာ)က မောင်မိုးသူကို ကာလသားကြီးလုပ်ပြီး လူငယ်တွေကြားမှာ တဝါးဝါး တဟားဟား လုပ်နေတာ တွေ့မြင်ရတိုင်း စာမရေးဘဲ နေရကောင်းလားလို့ ကြိမ်းမောင်းလေ့ ရှိတယ်။ “မောင်စိန်ဝင်းများ ဘယ်လောက်ရေးနေသလဲ” လို့လည်း နှိုင်းယှဉ် ပြောလေ့ရှိတယ်။ အဲဒီအခါ မောင်မိုးသူက “ဒေါ်ဒေါ်ကလည်း သူက တနေ့လုံး အိမ်ထဲမှာပဲ နေရတဲ့သူ၊ ရေးနိုင်မှာပေါ့ ကျွန်တော်တို့က လည်ရသေးတာ” လို့ ပြန်ဖြေလေ့ရှိတယ်။လိုင်စင်ရ ဒုက္ခိတမှန်ပါတယ်။ အိမ်ထဲကအိမ်ပြင် မထွက်နိုင်တာလည်း အကြောင်းတခု ဖြစ်ပါတယ်။ သာရေး၊ နာရေး ဆိုတဲ့ လောကဝတ်တွေနဲ့ ကင်းလွတ်ခွင့် လိုင်စင်ရထားတဲ့ ဒုက္ခိတတယောက်ဖြစ်တော့ ရှိရှိသမျှ အချိန်အားလုံးကို ကိုယ်ကြိုက်သလို စီမံဖန်တီးခွင့်ရတယ်။ စာဖတ်ချင်သလောက် ဖတ်၊ ရေးချင်သလောက် ရေးနေနိုင်တယ်။ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း အားလုံးကလည်း “သူက အပြင်ထွက်နိုင်ရှာတာ မဟုတ်ဘူး” ဆိုတဲ့ မေတ္တာစိတ်နဲ့ မပျက်မကွက် လာကြတယ်။ ဂျာနယ်မဂ္ဂဇင်းတွေကလည်း အလားတူပဲ။ “လာနိုင်တာ မဟုတ်ဘူး” ဆိုပြီး အိမ်လာ စာမူယူကြ၊ ဂျာနယ်လာပို့ကြ လုပ်ပေးကြတယ်။ ခြုံပြောရရင်တော့ မေတ္တာတွေကြောင့် ရှင်သန်နေရတာလို့ပဲ ပြောရမှာပါ။အလေးအနက်ဖတ်သူနယ်ပေါင်းစုံက စာဖတ်သူများက စာတတန်၊ ဖုန်းတတန်နဲ့ သတင်းပေါင်းစုံ ပြောတတ်ကြသလို သူတို့ ရေးစေချင်တာတွေလည်း ဒါလေးတော့ ရေးသင့်တယ် ထင်တယ်။ ဟိုဟာလေးတော့ ထောက်ပြ ဝေဖန်သင့်တယ် ထင်တယ်။ ဒီကိစ္စကတော့ ပြောမှကို ဖြစ်တော့မှာ စသဖြင့် စသဖြင့်လည်း အကြံပေးဉာဏ်ပေး လုပ်တတ်ကြတယ်။ ဒါမျိုးတွေကြောင့်လည်း ရေးစရာတွေ မပြတ်ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကလည်း မန္တလေးက စာဖတ်သူတယောက်က ဖုန်းဆက်ပြီး သူဘဝင်မကျ ဖြစ်နေတာတွေကို ပြောပြတယ်။ သူက စာဖတ်သက် နှစ်ငါးဆယ်လောက် ရှိသူဖြစ်တယ်။ ဖတ်တဲ့အခါမှာလည်း အပျင်းပြေ အပျော်ဖတ်သဘော မဟုတ်ဘဲ အလေးအနက်ဖတ်သူ (Serious Reader) ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ပြီးတာနဲ့ စေ့စေ့စပ်စပ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး သုံးသပ်သူ (analytical thinking) လုပ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။အရက်သောက်တာပဲ လွမ်းစရာရှိသလားအခုရက်ပိုင်း အတွင်း မဂ္ဂဇင်းတွေဖတ်ရင်းနဲ့ ကဗျာဆရာ မောင်ချောနွယ်တို့ ကဗျာဆရာ မောင်လေးအောင် တို့ကို တမ်းတတဲ့ အလွမ်းစာတွေဖတ်ပြီး တော်တော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်လို့ အစချီပြီး ပြောပြသွားတာပါ။မောင်ချောနွယ်တို့ မောင်လေးအောင်တို့အကြောင်း ရေးသူတွေက သူတို့စာတွေ၊ ကဗျာတွေ အကြောင်း ခံစားပြတာတွေ သုံးသပ်ပြတာတွေ ရေးတာက နည်းနည်းလေးပဲ တွေ့ရပြီး စာတပုဒ်လုံးမှာ သူတို့နဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လို အရက်သောက်တဲ့အကြောင်း၊ အရက်မူးရင် သူတို့ ဘာတွေပြောပြီး ဘယ်လိုငိုတတ်တဲ့အကြောင်း စတဲ့ အရက် အကြောင်းတွေပဲ အများဆုံး ရေးကြတဲ့အကြောင်း ဒီစာတွေကို ဖတ်မိပြီးတော့ မောင်ချောနွယ်၊ မောင်လေးအောင် တို့လို ကဗျာဆရာတွေမှာ လွမ်းစရာဆိုလို့ အရက်သောက်တာ တခုတည်းပဲ ရှိသလားလို့ စာဖတ်ပရိသတ်က ထင်မှတ်သွားစေနိုင်တဲ့အကြောင်း၊ ဒါ့အပြင် သူတို့ရဲ့ ဇနီး သားသမီးတွေ၊ ချစ်သူခင်သူတွေအတွက်လည်း စိတ်ထိခိုက်စရာ ဖြစ်သွားစေနိုင်ကြောင်း အကျယ်တဝင့် ပြောပြသွားပါတယ်။သေနတ်ထက် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ကလောင်အဆိုးဆုံးကတော့ အရက်သောက်တဲ့အကြောင်းကို ဖုံးဖုံးဖိဖိ မလုပ်ဘဲ မြိန်ရည်ရှက်ရည်ကြီးကို ရေးနေကြတာပါပဲ။ နောက်ဆုံး သူ့စကားက တော်တော်စိတ်ပျက်ပုံရတဲ့ အသံမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ အရက်သောက်တာကို အပြစ်မတင်ပါဘူး။ ကြိုက်လို့ သောက်တာ သောက်ကြပါ။ ဒါပေမယ့် လူငယ်တွေ အတုယူ မမှားအောင် အရက်သောက်တာကို မြိန်မြိန်ရှက်ရှက်ကြီးတော့ မရေးကြစေချင်ဘူး။စာပေစွမ်းအားဟာ အင်မတန်ကြီးပါတယ်။ သေနတ်ကိုင်ထားတဲ့လက်က သူ့မှာရှိတဲ့ ကျည်တကပ်စာထက် လူ ပို မသတ်နိုင်ဘူး။ ကျည်ကုန်သွားရင် သူ့သေနတ်က ဘာမှ အသုံးမကျတော့ဘူး။ ထင်သလောက် ကြောက်စရာ မကောင်းဘူး။ ကလောင်ကိုင်ထားတဲ့ လက်ကတော့ လူပေါင်းမြောက်မြားစွာရဲ့ ဘဝတွေကို ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တဲ့ စွမ်းအားရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ပိုပြီး ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ သိပ်ပြီး သတိထားနိုင်မှ တော်ကာကျပါတယ်။ဆင်းရဲသားမို့ အထင်သေးမန္တလေးက စာဖတ်သူ ဒုတိယ ပြောတာကတော့ သဘာဝသရုပ်ဖော် အမည်ခံ ဝတ္ထုမျိုးတွေ ရေးသားတဲ့ စာရေးဆရာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပါတယ်။ တောင်သူတောင်သားတွေနဲ့ ဆင်းရဲသားတွေအကြောင်း ရေးကြသူအများစုဟာ သူတို့တတွေ ပညာမတတ်လို့ စရိုက်ကြမ်းပုံတွေ၊ တယောက်နဲ့ တယောက် ငွေတမတ်လောက်နဲ့ ထသတ်ကြပုံမျိုးတွေကို လူ့သဘာဝ ဆိုပြီး ရေးနေကြတာတွေဟာ တောသူ တောင်သား ဆင်းရဲသားတွေအကြောင်း အမှန်တကယ် မသိဘဲနဲ့ အပေါ်စီးက ငုံ့ကြည့်ပြီး ရေးတာတွေ ဖြစ်နေလို့၊ ဆင်းရဲသားနဲ့တောသူ တောင်သားတွေကို အထင်မြင်သေး ရှုတ်ချ စော်ကားသလို ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ဆင်းရဲသားနဲ့ တောင်သူတောင်သားတွေဟာ ဆင်းရဲကြလို့ ပညာ မတတ်ကြဘူး။ အပြောအဆို အနေအထိုင် ကြမ်းတမ်းတယ်။ ကြမ်းပေမယ့် လူအချင်းချင်း ရိုင်းစိုင်း ယုတ်မာတာမျိုးတွေတော့ မရှိဘူး။ အိမ်နီးချင်းတွေ ရန်ဖြစ်ချင် ဖြစ်ကြမယ်။ ဒါပေမယ့် သူအိမ်မှာ ဆန်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ကိုယ်ရှိတဲ့ ဆန်ကလေး ခွဲပေးကြတာပဲ။ သူ့အိမ်က ငါးပိရေကျို အနံ့ကလေးရရင် ပန်းကန်လေးကောက်ဆွဲပြီး သွားတောင်းလိုက်ကြတာပဲ။ မြို့သားတွေလို ဟန်မဆောင်ဘူး။ မကောက်ကျစ်ဘူး။ မျက်နှာက ပြုံးပြီး ဝမ်းတွင်း မပုပ်ဘူးလို့လည်း မခံမရပ်နိုင် ပြောပါတယ်။စာရေးဆရာတွေ သတိထားဒါတင်မက လတ်တလောဖြစ်ခဲ့တဲ့ မန္တလေး ရေကြီးမှုမှာ ရေဘေး ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ထမင်းထုပ်တွေ လိုက်ကောက်တော့ သူဌေးရပ်ကွက်တွေက တာဝန်ကျေ တအိမ်တထုပ်သာ ပေးကြပေမယ့် ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်တွေကတော့ တအိမ်ကို နှစ်ထုပ်၊ သုံးထုပ် ပေးကြတယ်။ ငါးထုပ် ခြောက်ထုပ် ပေးသူတွေလည်း ရှိတယ်။ ဘဝတူတွေချင်းမို့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ရှိကြတယ်လို့လည်း နမူနာပြ ပြောလိုက်ပါသေးတယ်။ဒီအချက်ကို စာရေးဆရာတွေ သတိထားသင့်ကြတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘဝသရုပ်ဖော် ဝတ္ထု၊ သရုပ်မှန် ဝတ္ထုလို့ဆိုတဲ့ အခါတိုင်း စာရေးဆရာအများစုက ဆင်းရဲမွဲတေတာနဲ့ စုတ်ပြတ်နုံချာတာတွေပဲ ရေးတတ်ကြတယ်။ ဒါလို ရေးတာတွေ ဖတ်ရတာ များလွန်းမက များလာတော့ စာဖတ်သူတွေက ငြီးငွေ့သွားပြီး မဖတ်ချင်တော့ဘူး။ တချို့က ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ သောကတွေနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ဖြေလျော့ချင်လို့ စာဖတ်ကြပြီး တချို့က အမောအပန်းဖြေဖို့ စာဖတ်ကြတာဖြစ်တယ်။သဘာဝမှန်၊ စရိုက်မှန်ရင်ဆင်းရဲမွဲတေတာတွေနဲ့ ခံရတာတွေချည်း ဖတ်ရတော့ အမောတွေ အပန်းတွေ မပျောက်တဲ့အပြင် ပိုပြီးတောင် စိတ်ညစ်သွားစေတယ်။ ဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းရေးမှ မဟုတ်ပါဘူး။ လူချမ်းသာအကြောင်း ရေးရင်လည်း လူချမ်းသာတွေရဲ့ အမူအကျင့်နဲ့ စရိုက်တွေကို ပီပြင်အောင် ရေးပြတတ်ရင် ဘဝသရုပ်ဖော် ခေါ်နိုင်တာပါပဲ။ပညာတတ် လူတန်းစားတွေ အကြောင်း ရေးပြရင်လည်း ပညာတတ်တွေရဲ့ စရိုက်သဘာဝတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် တိတိကျကျ ရေးပြနိုင်ရင် ပီပြင်တဲ့ ဘဝသရုပ်ဖော် ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့သဘာဝမှန်၊ စရိုက်မှန်ကို မှန်တဲ့အတိုင်း မြင်တတ်၊ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီး ရေးပြတတ်ရင် သရုပ်မှန်ဝတ္ထု၊ ဘဝသရုပ်ဖော်ဝတ္ထု ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ရေပေါ်ဆီတွေကြောင့်ပါဇာတ်ထဲက လူရွှင်တော်တွေတောင်မှ ခြေမသန်တဲ့သူ၊ မျက်စိတဖက်လပ် ဖြစ်တဲ့သူ စတဲ့ အားနည်းချို့ယွင်းချက် တခုခု ရှိနေသူတွေကို မလှောင်ရ၊ မပြောင်ရ၊ မပြက်ရဘူးဆိုတဲ့ ကျင့်ဝတ်ကို လိုက်နာ စောင့်ထိန်းကြပါတယ်။ အဖိနှိပ်ခံ ဆင်းရဲသား နင်းပြားတွေကို လှောင်ပြောင်သရော်တာ၊ နှိမ့်ချပြောဆိုတာမျိုး မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့ အခြေခံ လူ့ကျင့်ဝတ်လေးလောက်ကိုတော့ စာရေးဆရာတွေ ထိန်းသိမ်းဖို့ သိသင့်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ဘယ်နိုင်ငံ၊ ဘယ်လူမျိုးကိုပဲ ကြည့်ကြည့် တောသူတောင်သား ဆင်းရဲသားတွေကြောင့် တိုင်းပြည်ပျက်တယ်ဆိုတာ မရှိခဲ့ဖူးပါဘူး။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ လူသတ်စစ်ပွဲကြီးတွေ ဖန်တီးခဲ့တာလည်း တောသူတောင်သား ဆင်းရဲသားတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ မြို့နေ ရေပေါ်ဆီလူတန်းစား (အီလစ်)တွေနဲ့ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာ ပြီးရောဆိုတဲ့ စီးပွားရေးသမား လူချမ်းသာတွေကြောင့် စစ်ပွဲကြီးတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြပြီး တိုင်းပြည်တွေပျက် လူတွေသေခဲ့ကြရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာလောက်တော့ စာရေးဆရာတွေ သိသင့်ကြတယ် မဟုတ်ဘူးလားဗျာ။လူထုစိန်ဝင်း
အနိုင်ရ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည် စာရင်း (ရေတွက်ဆဲကာလ၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်)
အမှန်တရားကို မြင်တတ်ပါ၊ လက်ခံတတ်ပါ၊ အမှန်တရားနှင့်အတူ ရှေ့သို့ဦးတည်လျှောက်လှမ်းကြပါ။ လမ်းပေါ်က အမှိုက်မဖြစ်ပါစေနှင့်။ မဲဆောက်အမှိုက်ပုံက အမှိုက်တွေကတောင် မြန်မာအချို့အတွက် အကျိုးပြုနေချိန်မှာ မဲဆောက်အမှိုက်ပုံက အမှိုက်တစ်စ လောက်ပင် တန်ဖိုးမရှိသော့ နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံဘဝ၊ နိုင်ငံရေးဘလော့ဂါဘဝ၊ လူမျိုးချင်း သွေးထိုးပေးသည့် မီဒီယာသမားများ ဘဝ ကို စွန့်လွှတ်ပြီး ပြည်သူတွေနှင့် ပူးပေါင်းကြပါ (http://oppositeyes.blogspot.com/)မဲပေးသူများပေမယ့် စနစ်တကျနဲ့သာ တန်းစီမဲပေးကြတဲ့ ချစ်စရာ မြန်မာပြည်သူများ(၁၇၅)အမတ်ဦးရေ ၄၇ ဦး ရှိမည့် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၌ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ RNDP အမတ်ဦးရေ၁၈ ဦးဖြင့် မစိုးမိုးနိုင်သည့်အပြင် စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်များကိုပါ အင်အား ယှဉ်ပြိုင်ရန် တစညအပြင်အခြားပါတီများဖြင့် မဟာမိတ်ဖွဲ့ရေး ကြိုးပမ်းမည်ဟု RNDPက ပြောဆို ....(၁၇၄)ကချင်ပြည်နယ်မှ ၁၈ မြို့နယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်နှင့် လူမျိုးစုလွှတ်တော်များအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများ၏ အမည်စာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၁၈ ဦး (ကချင် ၉ ဦး၊ ဗမာ ၉ ဦး)၁။ မြစ်ကြီးနားမြို့ဦးသိန်းဇော် (ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ-USDP)၂။ ဝိုင်းမော်မြို့ဦးယိမ်းဘောမ် (တစည-NUP)၃။ တနိုင်းမြို့ဦးမျိုးဆွေ (ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ-USDP)၄။ ချီဖွေမြို့ဦးဇုန်းတိန့် (USDP)၅။ ဆော့လောမြို့ဦးဇောင်းခေါင် ( ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ-USDP)၆။ အင်ဂျန်းယန်မြို့ဒေါ်ဒွဲဘူ (စဒက-UDPKS)၇။ မိုးညှင်းမြို့ဦးကျော်စိုးလေး (ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ- USDP)၈။ မိုးကောင်းမြို့ဦးဘုန်းဆွေ (ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ-USDP)၉။ ဖားကန့်မြို့ဦးအုန်းမြင့် ( ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ-USDP)၁၀။ ဗန်မော်မြို့ဦးလွန်းမောင် (ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ-USDP)၁၁။ မိုးမောက်မြို့ဦးဇော်ထွန်း (ရှမ်းတိုင်းရင်းသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ- SNLP)၁၂။ မန်စီမြို့ဦးထွန်းထွန်း(ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ-USDP)၁၃။ ရွှေဂူမြို့ဦးဝင်းနိုင် (ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ-USDP)၁၄။ ပူတာအိုမြို့ဦးယောဂျီဒွေ့ (ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ-USDP)၁၅။ မချမ်းဘောမြို့ဦးအင်ထုဖုန်ဆန်း (တစည-NUP)၁၆။ နောင်မွန်းမြို့ဦးဂျီဖုန်ဆာရ် (ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ-USDP)၁၇။ ခေါင်လန်ဖူးမြို့ဦးစီခန်ရမ်(ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ-USDP)၁၈။ ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့ဦးခမိုင်တန်(ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ-USDP)ကချင်ပြည်နယ်မှ အမျိုးသားလွှတ်တော် ၁၂ ဦး(ကချင် ၅ ဦး၊ ဗမာ ၅ ဦး၊ ရှမ်း ၂ ဦး)မြစ်ကြီးနားမြို့၁။ ဦးခက်ထိန်နန် (UDPKS)ဝိုင်းမော်မြို့၂။ ဦးဂမ်ဆိုင်း (NUP)တနိုင်းမြို့၃။ ဦးဘရန်ရှောင် (NUP)ဆော့လော/ချီဖွေ/အင်ဂျန်းယန်မြို့၎။ ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း(USDP)မိုးညှင်းမြို့၅။ ဦးဖေသောင်း (USDP)၆။ ဦးစိုင်းတင်အောင် (USDP)မိုးကောင်းမြို့၇။ ဦးစံပြည့် (USDP)ဖားကန့်မြို့၈။ ဦးမြအုန်း (USDP)ဗန်မော်မြို့၉။ ဒေါက်တာ ထွန်းလွင် (USDP)မိုးမောက်မြို့၁၀။ ဦးစိုင်းမြမောင် (SNLP)မန်စီမြို့/ရွှေဂူမြို့၁၁။ ဦးစံထွန်း (USDP)ပူတာအိုခရိုင်၁၂။ ဦးဂျီယောဝူ (NUP)ပြည်နယ်လွှတ်တော် ၃၆ ဦး(ကချင် ၂၁ ဦး၊ ဗမာ ၁၂ ဦး၊ ရှမ်း ၂ ဦး)မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၁ (၁) ဦးကမန်းဒူနော်(NUP)မြစ်ကြီးနားမြို့ မဲဆန္ဒနယ်၂ (၂) ဦးခင်မောင်ထွန်း (USDP)၀ိုင်းမော် ၁ (၃) ဦးမြအောင် (NUP)၀ိုင်းမော်၂ (၄) ဦထောလွမ်း(NUP)တနိုင်း ၁ (၅) ဦးလဂျွန်အန်ဆိုင်း(USDP)တနိုင်း ၂ (၆) ဦးကွမ်ဆောင်းဆမ်အောန် (USDP)ဆော့လော် ၁ (၇) ဦးဇောင်းခေါင်(NUP)ဆော့လော် ၂ (၈) ဦးယောန(တသီးပုဂ္ဂလ) အင်ဂျန်းယန် ၁ (၉) ဦးအလေးပါး(UDPKS)အင်ဂျန်းယန် ၂ (၁၀) ဦးဘရန်ရှောင်(USDP)ချီဖွေ ၁ (၁၁) ဦးဘီထောဇောင်း(USDP)ချီဖွေ ၂ (၁၂) ဦးဇခုံယိန်းဆောင်(UDPKS)မိုးညှင်း ၁ (၁၃) ဦးညွန်အောင် (USDP)မိုးညှင်း ၂ (၁၄) ဦးညီလေး(USDP)မိုးကောင်း ၁ (၁၅) ဦးစိုးနွယ်(USDP)မိုးကောင်း၂ (၁၆) ဦးကျော်မြင့်(USDP)ဖားကန့် ၁ (၁၇) ဦးအင်ဖောင်းဂမ် (USDP)ဖားကန့် ၂ (၁၈)ဦးစိုင်းမြင့်ကျော် (USDP)ဗန်းမော် ၁ (၁၉) ဦးကျော်ဆွေ (NUP)ဗန်းမော် ၂ (၂၀) ဦးထွန်းရှိန် (NUP)မိုးမောက် ၁ (၂၁) ဦးဆွတ်နောင် (NUP)မိုးမောက် ၂ (၂၂) ဦးစိုင်းမျိုးအောင်(SNLP)မံစီ ၁ (၂၃) ဦးထွန်းကြိုင်(USDP)မံစီ ၂ (၂၄) ဦးစိုင်းမောင်ရွှေ (SNLP)ရွှေဂူ ၁ (၂၅) ဦးအောင်နိုင်(USDP)ရွှေဂူ ၂ (၂၆) ဦးဖိုးပါကြွယ်(USDP)ပူတာအို ၁ (၂၇) ဦးအားရီ (NUP)ပူတာအို ၂ (၂၈) ဦးလီပေါ်ရီမြ(SNLP)မချမ်းဘော ၁ (၂၉) ဦးရားဝမ်ဂျုံ(USDP) မချမ်းဘော ၂ (၃၀) ဦးထင်မောင်ထူး(NUP)နောင်မွန်း ၁ (၃၁) ဦးချန်သာခင်(USDP)နောင်မွန်း ၂ (၃၂) ဦးမဘုဒဂုဏ်(USDP)ခေါင်လန်ဖူး ၁ (၃၃) ဦးဒိန်ခန်သာဝိ (USDP) ခေါင်လန်ဖူး ၂ (၃၄) ဦးခင်လေးဖုန်ဆားရ်(NUP) ဆွမ်ပရာဘွမ် ၁ (၃၆) ဒေါ်ဘောက်ဂျာ(USDP)ဆွမ်ပရာဘွမ် ၂ (၃၆) ဦးမုန်ပေါ်နော်(USDP)လူမျိုးစုလွှတ်တော် ၄ ဦး၁။ ဗမာ လူမျိုးစုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးပါ (NUP)၂။ ရှမ်း လူမျိုးစု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်ပြုံးရီ (SNLP)၃။ ရဝမ် လူမျိုးစု လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဂွမ်ရီဒီး(USDP)၄။ လီဆူ လူမျိုးစု လွှတ်တော် ဦးအားစီ (USDP) ....(၁၇၃)ချင်းပြည်နယ်တွင် ချင်းအမျိုးသား ပါတီများဖြစ်သော CNP ကဟားခါးမြို့နယ် ပြည်နယ်အဆင့် လွှတ်တော်အတွက် ၂ ဦး၊ထန်တလန်မှ ၂ ဦး၊ တီးတိန်မှ ၁ ဦးနှင့် CPP က ဖလမ်းမှ ၂ ဦး၊ပလက်ဝမှ ၂ ဦးနှင့် ကန်ပက်လက်မှ ၁ ဦး၊ (၂)ပါတီ စုစုပေါင်း(၁၀)နေရာတို့ အရွေးခံရ ...(၁၆၇)ကွယ်လွန်သူ ရုပ်ရှင်မင်းသား ဒွေး၏ ဖခင် ဗိုလ်ကြီးဟောင်းဦးတင်ထွန်းမောင် ဦးဆောင်သော ၀ံသာနု NLD ခေါ်အမျိုးသားနိုင်ငံရေး မဟာမိတ်များ အဖွဲ့ချုပ်သည် အမတ်၁၃ နေရာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ တစ်နေရာမှ မရရှိဟု သိရ ...(၁၆၄)သျှမ်း ကျားဖြူပါတီက အမျိုးသားလွှတ်တော် ၃ ဦး (ရှမ်းပြည်နယ်၂ ဦး၊ ကချင်ပြည်နယ် ၁ ဦး)၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၁၈ ဦး(ရှမ်းပြည်နယ်၁၇ ဦး၊ ကချင်ပြည်နယ် ၁ ဦး)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ၃၅ ဦး (ရှမ်းပြည်နယ်၃၂ ဦး၊ ကချင်ပြည်နယ် ၃ ဦး)၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာ ၁ ဦး(မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး) ...(၁၅၇)နေရာတချို့တွင် မဲစာရင်းများ မပြီးပြတ်သေးဟု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ကြေညာ ...(၁၅၆)၁၁၅၇ နေရာရှိသော လွှတ်တော်သုံးရပ်စလုံးအတွက် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင် မဟုတ်သော အရွေးခံရသူ စုစုပေါင်း ၁၉၃ ဦးခန့်သာ(ခန့်မှန်းချေ) ရှိသေးကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲ လေ့လာသူများက ပြောဆို ...(၁၅၅)တစ်သီးပုဂ္ဂလများထဲတွင် ရန်ကုန် တောင်ဥက္ကလာပမဲဆန္ဒနယ်မှဒေါက်တာစောနိုင် အရွေးခံရ ...(၁၅၄)အမတ်နေရာ တစ်ထောင်ကျော် ၀င်ပြိုင်သော တစညကလောလောဆယ်အချိန်အထိ ၅၇ နေရာ၊ ၄၇ နေရာ ၀င်ပြိုင်တဲ့ဦးသုဝေ ခေါင်းဆောင်သော ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ၄ နေရာ၊၁၅၆ နေရာ ၀င်ပြိုင်တဲ့ ရှမ်း ကျားဖြူပါတီက ၅၇ နေရာ၊ ၄၄နေရာ ၀င်ပြိုင်တဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီက၃၅ နေရာ၊ ၃၄ နေရာဝင်ပြိုင်တဲ့ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီက ၁၆ နေရာ၊ ၁၆ နေရာ ၀င်ပြိုင်တဲ့ ကရင်ပြည်သူ့ပါတီက၇ နေရာ နိုင်နေတယ်(၁၅၃)မွန်ပြည်နယ်တွင် မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီကသံဖြူဇရပ်မြို့နယ်- ၃ နေရာ(အမျိုးသားလွတ်တော်၊ ပြည်သူ့လွတ်တော်၊ ပြည်နယ်အဆင့်လွတ်တော်)၊ မုဒုံမြို့နယ်- ၁ နေရာ(အမျိုးသားလွတ်တော်)၊ ပေါင်မြို့နယ်- ၁ နေရာ (အမျိုးသားလွတ်တော်)၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်- ၃ နေရာ (အမျိုးသားလွတ်တော်၊ပြည်သူ့လွတ်တော်၊ ပြည်နယ်လွတ်တော်)၊ ကျိုက်မရောမြို့နယ်၁ နေရာ (ပြည်နယ်လွတ်တော်)တို့ အရွေးချယ်ခံရ ...(၁၅၁)မန္တလေးတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု NDF ပါတီ အမတ်လောင်း ၄ဝ စလုံး ရှုံးနိမ့်သွားကြောင်း သိရှိရ ...(၁၅၀) မော်လမြိုင်မြို့နယ်တွင် တစညနှင့် မွန်ပါတီတို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကို ရှုံးနိမ့်သွား ...(၁၄၉)ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အမျိုးသား လွတ်တော် ၁၂ နေရာတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီသည် ၄- နေရာသာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ ထို ၄ နေရာမှာဦးမြတ်သူ (တာမွေ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ ဒေါပုံ၊ ပုဇွန်တောင်၊ဗိုလ်တထောင်)၊ ဦးတင်ခ (ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်)၊ ဒဂုံမြို့သစ်(ရှေ့)၊ မြောက်ဥက္ကလာပ)၊ ဒေါက်တာမောင်သင်း(တောင်ဥက္ကလာပ၊ ရန်ကင်း၊ သင်္ကန်းကျွန်း)၊ ဒေါက်တာမျိုးသန့်တင်(ကမာရွတ်၊ လှိုင်၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ လသာ၊ လမ်းမတော်၊အလုံ၊ ဆိပ်ကမ်း)။ ပြည်သူ့လွတ်တော်နေရာအတွက် ရှုံးနိမ့်ခဲ့သောနေရာများမှာ သင်္ကန်းကျွန်း၊ လသာ၊ မြောက်ဥက္ကလာ ၊ မြောက်ဒဂုံ၊စမ်းချောင်း၊ ပုဇွန်တောင်၊အလုံ၊ လမ်းမတော်။ တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်နေရာ ၉ဝ တွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးက ၁၅ နေရာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရာယင်းတို့မှာ လှိုင်၊ တာမွေ၊ ဒေါပုံ ၊ မြောက်ဥက္ကလာ၊ သင်္ကန်းကျွန်း၊ကမာရွတ်၊ ဗဟန်း၊ လမ်းမတော်၊ မြောက်ဒဂုံ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်တို့ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆို ....(၁၄၆)ချင်းပြည်နယ် ဖလမ်းမြို့နယ်တွင် ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ CPPက လွှတ်တော် ၃ ရပ်လုံးအတွက် အနိုင်ရကြောင်း၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် အမှတ်(၁)အတွက် ဦးကျွန်ခဲန်း၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်အမှတ်(၂) အတွက် ဦးဇုန်လှယ်ထန်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက် ဦးခွန်လိန်း၊ ပြည်နယ်အဆင့် လွှတ်တော်အမှတ်(၁)အတွက် ဦးနုထန်း၊ အမှတ်(၂)အတွက် ဦးနိုဆွန်တို့ အရွေးခံရကြောင်း ...(၁၄၅)ကချင်ပြည်နယ်တွင် အရွေးခံရသော ရှမ်း- ကျားဖြူပါတီ၏စာရင်းမှာ ...၁/စိုင်းဇော်ထွန်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ မိုးမောက်မြို့နယ်၂/စိုင်းမြမောင်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် -၁၀(မိုးမောက်မြို့နယ် တစ်မြို့နယ်တည်းပါဝင်သည်။)၃/စိုင်းမျိုးအောင်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)၊မိုးမောက်မြို့နယ်။၄/စိုင်းအိုက်ရွှေ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)၊ မံစီမြို့နယ်။၅/ဦးလီပေါ်ရဲ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)၊ ပူတာအိုမြို့နယ် ...(၁၄၄)နောက်ဆုံးရရှိသည့် စာရင်းများအရ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (ကျားဖြူ)မှ အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက်၂ ဦး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက် ၁၆ ဦး၊ ပြည်နယ်အဆင့်လွှတ်တော် ၃၄ ဦး၊ ရေးရာ ၁ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၅၃ ဦး အနိုင်ရရှိဟု ကျားဖြူပါတီက ပြောကြား ...(၁၄၃)ပြိုင်ဖက်မရှိလို့ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် အမတ်ဖြစ်သူများ ...အမျိုးသားလွှတ်တော်(၁) ဦးနေ၀င်းထွန်း၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၉)၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(၂) ဦးထွန်းကျော်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁၀)၊ ပလောင်(တအာင်း)အမျိုးသားပါတီ(၃) လျူကွယ်ရှိ၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁၁)၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီပြည်သူ့လွှတ်တော်(၁) ခွန်သိန်းဖေ၊ ဟိုပုန်း၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(၂) ဦးဝင်းကို၊ ဆီဆိုင်၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(၃) ခွန်မောင်သောင်း၊ ပင်လောင်း၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(၄) ဦးမောင်မောင်ဆွေ၊ နမ့်ဆန်၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ(၅) ဦးအိုက်မုန်း၊ မန်တုံ၊ ပလောင်(တအာင်း)အမျိုးသားပါတီ(၆) ဦးကျော်နိုင်၊ လောက်ကိုင်၊ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ(၇) ကျန်တဲဝမ်၊ ကုန်းကြမ်း၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီပြည်နယ်အဆင့် လွှတ်တော်(၁) ဦးစံလွင်၊ ဟိုပုန်း(၂)၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(၂) ခွန်အောင်နိုင်ဦး၊ ပင်လောင်း(၂)၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(၃) ဦးမောင်ကျော်၊ နမ့်ဆန်(၁)၊ ပလောင်(တအာင်း)အမျိုးသားပါတီ(၄) ဦးအောင်ထွဏ်း၊ နမ့်ဆန်(၂)၊ ပလောင်(တအာင်း)အမျိုးသားပါတီ(၅) မိုင်းအုဏ်းခိုင်၊ မန်တုံ(၁)၊ ပလောင်(တအာင်း)အမျိုးသားပါတီ(၆) ဦးအိုက်ခ၊ မန်တုံ(၂)၊ ပလောင်(တအာင်း)အမျိုးသားပါတီ(၇) ခွန်ထွန်းလူ၊ ဟိုပန်(၁)၊ “၀”ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(၈) စိုင်းလှဖေ၊ ဟိုပန်(၂)၊ “၀”ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(၉) ပယ်စောက်ချိန်၊ လောက်ကိုင်(၁)၊ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ(၁၀) မြင်ရှော်ချန်း၊ လောက်ကိုင်(၂)၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ(၁၁) ဝေရှောက်ရင်၊ ကုန်းကြမ်း(၁)၊ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ(၁၂) ကျောက်တယ်ချန်၊ ကုန်းကြမ်း(၂)၊ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ(၁၃) ခွန်ထွန်း၊ မက်မန်း(၁)၊ ၀ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ...(၁၃၉)ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်အသီးသီး၌ ယှဉ်ပြိုင်ကြသည့် အမျိုးသမီးများမှာ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အဆင့်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့နန်းဝါနုအသက် ၃၂ နှစ်၊ မူဆယ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှအသက် ၆၂ နှစ် နန်းငွေငွေ၊ နမ္မတူမြို့နယ် အမှတ်(၂)မှ အသက်၄၅ နှစ် နန်းခမ်းအေး၊ မိုင်းယောင်းမြို့နယ် အမှတ် (၂)မှ အသက်၆၁ နှစ် နန်းမြမြလွင်၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ် အမှတ်(၂)မှ အသက် ၂၆ နှစ်နန်းခမ်းပိုင်းနဲ့ လဲချားမြို့နယ် အမှတ်(၁)မှ အသက် ၂၅ နှစ်နန်းအက်စ်ကီးမိုး တို့ အသီးသီးအနိုင်ကြောင်း ရန်ကုန် ကျားဖြူရုံးချုပ်က ပြောဆို ...(၁၃၈)သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (ကျားဖြူပါတီ)မှ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သည့် အမျိုးသမီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၉ ဦးအနက် ၆ ဦး အနိုင်ရရှိကြောင်း ပြောဆို ...(၁၃၆)ရန်ကုန်တိုင်းတွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက် ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီက ၈ နေရာ၊NDF ပါတီက ၄ နေရာ ရရှိကြောင်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ၃၇ နေရာ၊ NDF က ၈ နေရာ ရရှိကြောင်း၊တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အတွက်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ၇၄ နေရာ၊တစည ပါတီက ၈ နေရာ၊ NDF ပါတီက ၄ နေရာ၊ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ၂ နေရာ၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများက ၁ နေရာ၊တသီးပုဂ္ဂလက ၁ နေရာ အသီးသီး ရရှိကြောင်း သိရ ...(၁၃၁)တာမွေမြို့နယ်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့နယ်၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ပုဇွန်တောင် မြို့နယ်၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်တို့ပါဝင်သည့် အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၄ တွင် ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုးမှာရှုံးနိမ့်သွားပြီး ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီမှ ဦးမြတ်သူ (ခ) စာရေးဆရာကျော်ဇင်ညွန့် (တက္ကသိုလ်မြတ်သူ)က ရသွားကြောင်း သိရ ....(၁၂၈)ရွှေတောင်မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ဒေါက်တာမြဦးနှင့် ဒေါက်တာ ဒေါ်အေးမြင့်တို့က အမျိုးသားလွှတ်တော်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် နေရာများအတွက် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ချုပ်မှ ဦးအေးလွင်နှင့် ဦးစိုးသန်းတို့အပေါ် အသာစီး အနိုင်ရသွားကြ ....(၁၂၃)ရှမ်းပြည်နယ် အခြေစိုက် ရှမ်းအမျိုးသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(ကျားဖြူ) သည် ရှမ်းပြည်နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်များအပါအဝင် မဲဆန္ဒနယ် ၂၈ နယ် တွင်သာ အနိုင်ရထားသေး။လွှတ်တော် ၃ ရပ်စလုံးတွင် အနိုင်ရရှိသော မဲဆန္ဒနယ်များမှာနမ့်ခမ်း၊ ကျောက်မဲ၊ ကျေးသီ၊ မိုင်းကိုင်၊ မိုင်းရယ်၊ သီပေါမဲဆန္ဒနယ်များ ဖြစ်ပြီး နမ္မတူ၊ မူဆယ်မြို့နယ်များတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်တွင် အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း အတည်ပြုပြောဆို ...(၁၂၂)ရန်ကုန်တိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းတို့တွင် NDF က နေရာ ၂၀ မပြည့်သေး၊ဦးသုဝေတို့ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ၃ နေရာ၊ ရှမ်းပြည်နယ်တွင်ကျားဖြူပါတီက နေရာ ၄၀၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် RNDP က နေရာ၃၀ ကျော်၊ ချင်းပြည်နယ်သတင်း မသိရသေး၊ ကျန်နေရာအများစုတွင်ပြည်ခိုင်ဖြိုးမှ အပြတ်အသက်အနိုင်ရ(၁၂၁)ကယားပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ မကွေးတိုင်းတို့တွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ နေရာအများစုကို ရယူသွား ....(၁၂၀)မွန်ပြည်နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာအများစုတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးအနိုင်ရ ....(၁၁၉)ရှမ်းပြည်နယ် လင်းခေးမြို့နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အတွက် စိုင်းကျော်ဇောသန်း (ကျားဖြူပါတီ)၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် စိုင်းလှကျော် (ကျားဖြူပါတီ)၊ ပြည်နယ်အဆင့် မဲဆန္ဒနယ်(၁)မှာ စိုင်းအိုက်အေး (ကျားဖြူပါတီ)၊ ပြည်နယ်အဆင့် မဲဆန္ဒနယ် (၂)မှာ စိုင်းလွင် (ကျားဖြူပါတီ) တို့ အရွေးခံရ အတည်ပြုပြီ ...(၁၁၆)ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြို့နယ် ၄၅ မြို့နယ်စလုံးတွင်ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီသည် မြို့နယ်၃၇ မြို့နယ်တွင် အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း စည်းရုံးရေးမှူး ဦးတင်မောင်ဝင်းကThe Voice Weekly သို့ ပြောကြား၊ "မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်မှာတော့ လွတ်တော်သုံးရပ်စလုံး နိုင်တယ်။ ကျန်တဲ့မြို့နယ်တွေ စာရင်းကတော့ မရသေးပါဘူး။ နောက်နှစ်ရက်လောက်မှ သိရမယ်" ဟု နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့ ညဦးပိုင်းတွင် ပြောကြား ...(၁၁၅)ရန်ကုန်တိုင်း လှိုင်သာယာမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ရွေးပွဲမှာ တစညမှ ဦးနေလင်း မဲဆန္ဒနယ် (၂)အတွက် အရွေးခံရသတင်း အတည်ဖြစ်ပြီ ...(၁၁၄)သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်မှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ၁၉၉၀ ခုနှစ်က အရွေးခံရဖူးသည့် ဦးသိန်းညွှန့် (NDF)ထပ်မံ အရွေးခံရ၊ သာကေတမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်နေရာအတွက် ဦးတင့်ဝေ (NDF)၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်နေရာ အတွက် ဦးသန်းထွန်း (NDF)တို့ အရွေးခံရ၊ NDF မှ ရန်ကုန်တိုင်း (၈) မြို့နယ်တွင်ကိုယ်စားလှယ် (၁၄)ဦး အရွေးခံရဟု အတည်ပြု ပြောကြား ...(၁၁၃)ရခိုင်အမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ RNDP က ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း၄၃ နေရာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ ၃၉ နေရာ ဖြစ်သော ကျောက်ဖြူ၊ ရသေ့တောင်၊ မင်းပြား၊ ကျောက်တော်၊ ပေါက်တော၊ မြေပုံ၊ ပုဏ္ဍားကျွန်း၊မာန်အောင်၊ မြောက်ဦး စသည့် မြို့နယ်များတွင် လွှတ်တော် ၃ ခုစလုံး၌ အနိုင်ရသိရ ...(၁၁၁)တောင်ဥက္ကလာပ မဲဆန္ဒနယ်မှာ အမျိုးသားလွတ်တော်အတွက် NDF မှ ဦးဖုန်းမြင့်အောင် အနိုင်ရရှိဟု သိရ ...(၁၁၀)ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့နယ်တွင် ရခိုင်အမျိုးသားတိုးတက်ရေး RNDP ပါတီမှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက်ဦးဘရှင်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် အမှတ်(၁၀) အတွက်ဦးအုန်းကြိုင်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)အတွက် ဦးကျော်လွင်၊ အမှတ် (၂) အတွက် ဦးတင်ဖေတို့ အရွေးခံရ သတင်း အတည်ပြုပြီ ....(၁၀၉)ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ်တွင် ရခိုင်အမျိုးသားတိုးတက်ရေး RNDP ပါတီမှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက်ဒေါ်ခင်စောဝေ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် အမှတ်(၆) အတွက်ဦးအုန်းကြိုင်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)အတွက် ဦးဖိုးမင်း၊ အမှတ် (၂) အတွက် ဦးလှသိန်းမောင်တို့ အရွေးခံရ သတင်း အတည်ပြုပြီ ....(၁၀၈)ရခိုင်အမျိုးသား RNDP ပါတီ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူနှင့် ရသေ့တောင်တို့တွင် လွှတ်တော် ၃ အရွေးခံရတဲ့ သတင်း အတည်ဖြစ်ပြီ ...(၁၀၇)NDF က ကျောက်တန်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးကြည်သန်း သတင်း အတည်မပြုနိုင်သေးဟုထပ်မံသိရ ...(၁၀၆)ကချင်ပြည်နယ် ၀ိုင်းမော်မြို့နယ် ပန်ဝါမြို့၌ လက်နက်ချခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သော ကချင် ပြည်ခိုင်ဖြိုး စခုန့်တိန့်ယိင်း အနိုင်ရသတင်း အတည်ဖြစ်ပြီ ...(၁၀၁)တစညနှင့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးသာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သော တနင်္သာရီတိုင်း လောင်းလုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်ရှိ လွှတ်တော် ၃ နေရာစလုံးတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုး အနိုင်ရနိုင်ကြောင်း အတည်ပြုပြီ ...(၁၀၀)ဧရာဝတီတိုင်း ကျိုက်လတ်မြို့တွင် လွှတ်တော် ၃ခု အတွက်မဲဆန္ဒနယ်အားလုံး၌ ပြည်ခိုင်ဖြိုး အနိုင်ရ(၉၉)လောလောဆယ် အချိန်အထိ ရန်ကုန်တိုင်းမှာ အရွေးခံရသောNDF ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ စာရင်း ...အမျိုးသားလွှတ်တော်၁။ ဒေါက်တာ မြတ်ဉာဏစိုး - အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် (၄) တာမွေ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ ဒေါပုံ၊ ပုဇွန်တောင်။၂။ ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည် - အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် (၁) မြောက်ဥက္ကလာပ၊ မြောက်ဒဂုံ၊ ဒဂုံအရှေ့။ပြည်သူ့လွှတ်တော်၁။ ဒေါက်တာသန်းဝင်း - မြောက်ဥက္ကလာပ၂။ ဒေါ်တင်နွယ်ဦး - မြောက်ဒဂုံ၃။ ဦးမျိုးသန့် - ရန်ကင်း၎။ ဦးအောင်ဇင် - ပုဇွန်တောင်၅။ ဦးအောင်မြတ်ထွန်း - ဗဟန်း၆။ ဦးခင်မောင်ဝင်း - လမ်းမတော်၇။ ဦးခင်မောင်ရီ - အလုံ၈။ ဦးကြည်မြင့် - လသာ၉။ ဦးကြည်သန်း - ကျောက်တန်း၁၀။ ဦးစိုးဝင်း - စမ်းချောင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၁။ ဦးအောင်ဆန်း မြောက်ဥက္ကလာပ (၁)၂။ ဦးသက်ထွန်းအောင် မြောက်ဥက္ကလာပ (၂)၃။ ဦးကျော် သင်္ဃန်းကျွန်း (၁)၄။ ဒေါ်သန်းသန်းမြင့် သင်္ဃန်းကျွန်း (၂) ....(၉၈)စစ်ကိုင်းတိုင်း ချောင်းဦးမြို့နယ် လွှတ်တော် ၃ ရပ်စလုံးအတွက် ပြည်ခိုင်ဖြိုးက အနိုင်ရ(၉၅)ဧရာဝတီတိုင်း လေးမျက်နှာ မြို့နယ်တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် နှင့်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ၃ ခုစလုံး၌ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီကအနိုင်ရသွားကြောင်း သိရ ....(၉၄)မန္တလေးတိုင်း မိုးကုတ်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်နေရာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးမှ ဦးဘဋ္ဌေး အနိုင်ရ ...(၉၁)ပဲခူးတိုင်း သာယာဝတီမှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးက တစည ကိုယ်စားလှယ် ဦးစန်းလွင်ကိုနိုင်(၉၀)ရန်ကုန်တိုင်း မင်္ဂလာဒုံမှာ လွှတ်တော် သုံးနေရာစလုံးအတွက် ပြည်ခိုင်ဖြိုး အနိုင်ရတဲ့ သတင်း အတည်ဖြစ်ပြီ ...(၈၉)ရှမ်းပြည်နယ် ကျိုင်းတုံမှာ ကျားဖြူပါတီ ရှုံးနိမ့်(၈၆)ရခိုင်ပြည်နယ် ပေါက်တောမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ လွှတ်တော် ၃ ရပ်လုံးမှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ RNDP က ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ဦးအောင်ကျော်ဇံ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာဦးကျော်ထွန်းအောင်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် အမှတ် ၁ မှာဦးမောင်ကျော်သိန်းနဲ့ အမှတ် ၂ မှာ ဦးတက်ထွန်းအောင်တို့ အနိုင်ရသတင်း အတည်ပြုပြီ ...(၈၅)မန္တလေးတိုင်း ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက် ပြည်ခိုင်ဖြိုးမှ ဒေါက်တာ ကျော်မြင့် ....(၈၄)မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်နှင့် မုဒုံမြို့နယ်တို့တွင် မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီမှ အနိုင်ရကြောင်း၊ ဘုရားသုံးဆူမြို့နယ်တွင် ယင်းပါတီမှ ဦးနိုင်ချစ်ဦး အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက်အနိုင်ရကြောင်း ....(၈၃)ရှမ်းပြည်နယ် ညောင်ရွှေမြို့နယ်အတွက် အင်းအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီမှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက် ဦးဝင်းရွှေ၊အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် (၁)အတွက် ဦးစန်းယု၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်(၁)အတွက် ဦးထွန်းအောင်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၂)အတွက် ဦးအောင်ကြည်ဝင်းတို့ အနိုင်ရသတင်း အတည်ပြုပြီ ...(၈၂)ရခိုင်တိုင်းရင်းသား RNDP ပါတီမှ ရခိုင်ပြည်နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွက် စစ်တွေ မဲဆန္ဒနယ် (၂)မှာ ဦးအောင်မြကျော်၊စစ်တွေ မဲဆန္ဒနယ်(၁)မှာ ဦးသာလူချေ၊ စစ်တွေ မဲဆန္ဒနယ်(၁)အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက် ဒေါက်တာအေးမောင်၊ စစ်တွေမဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက် ဦးမောင်ညိုတို့ အနိုင်ရ(၈၁)ရှမ်းပြည်နယ် ပြည်နယ်ဒေသကြီး လွှတ်တော်အဆင့် ရွေးပွဲမှာဒေါ်နန်းအက်စကီးမိုး (SNDP) နဲ့ ဦးစိုင်းကျော်ဇေယျ (SNDP)တို့ အနိုင်ရသတင်း အတည်ပြုကြပြီ ....(၈၀)ရှမ်းပြည်နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးပွဲ လဲချားမြို့နယ်အတွက်ဦးစိုင်းမောင်တင် (SNDP) အနိုင်ရသတင်း အတည်ပြုကြပြီ ...(၇၉)ဗဟန်းမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အတွက် DPM မှ ဒေါက်တာ ညိုညိုသင်း အနိုင်ရတယ်လို့ ဦးသုဝေက ပြောပါတယ်။ ပါတီရဲ့ မဲရုံကိုယ်စားလှယ်က ဗဟန်းမြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို သွားပြီး၊ အနိုင်ရကြောင်း လက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်လို့သိရ ...(၇၈)ရန်ကုန်တိုင်း မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အတွက် ဦးအောင်ကြည်က ထောက်ခံမဲ ၂၈၅၆၆ ရခဲ့ပြီး၊ ဦးသုဝေက ၂ဝ၂၅၇ ရတာကြောင့် ၈၃ဝ၉ မဲ လျော့နည်းပြီး မဲအားလုံးရဲ့၅ဝ. ၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ဦးအောင်ကြည်က ရပြီး၊ ဦးသုဝေက ၄၁. ၅ရာခိုင်နှုန်း ရသွားပါတယ်၊(၇၆)ပဲခူးတိုင်း ပဲခူးမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဆင့်ရွေးပွဲတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုး ဦးကြင်သိန်း အနိုင်ရသွား ....(၇၅)တာမွေမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အဆင့်တွင် ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်းဆွေ အနိုင်ရသတင်း အတည်ဖြစ်သွားပြီ ...(၇၄)ရန်ကုန် ပုဇွန်တောင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အဆင့်မှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးမှ ဦးတင်ထွန်းဦး အနိုင်ရသတင်း အတည်ပြုကြပြီ ...(၇၃)ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဆင့်မှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုး မှ ဦးသိန်းဇော် အနိုင်ရ ...(၇၂)ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်နှင့် သာကေတတို့တွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုး အနိုင်ရ(၇၁) (ညီအကိုချင်း ပြိုင်ပွဲ)ရန်ကုန်တိုင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်တွင်ထူးထူးခြားခြား ညီအစ်ကိုရင်းနှစ်ဦးမှ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနှင့် တစညပါတီတို့မှ ကိုယ်စားပြုယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ ညီဖြစ်သူ ဦးတင်မောင်ဝင်း (ပြည်ခိုင်ဖြိုး) အနိုင်ရရှိ ....(၇၀)မရမ်းကုန်းနဲ့ ကမာရွတ် မဲစာရင်းများ အပြီးသတ်အရ NDFရှုံးသွားကြောင့် မရမ်းကုန်းတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူဒေါ်ခင်ဖြူဖြူငြိမ်း (NDF) နှင့် ကမာရွတ်မှ ဦးကျော်မင်းလှိုင်(NDF) တို့မှ အတည်ပြု ပြောကြား ....(၆၉)ရွှေဘိုမဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးထွန်းလှအောင်သည်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် ငါးရက်အလိုတွင် နှလုံးရောဂါဖြင့်ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သဖြင့် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီမှ ဦးနီပွန်က ပြိုင်ဖက်မရှိအနိုင်ရ ....(၆၈)ချမ်းအေးသာဇံ၊ အောင်မြေသာဇံနှင့် ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်များကိုကိုယ်စားပြုသော အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁)မှဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သော NDF ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးတင်အောင်အောင်သည် နိုဝင်ဘာ (၈) ရက်နေ့ မနက် ၂ နာရီခန့်အချိန် မဲရေတွက်မှုရလဒ်အရ ဦးဆောင်အနိုင်ရနေကြောင်းပါတီ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးရုံးမှ The Voice Weeklyသို့ ပြောကြား ...(၆၇)ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိ မဲရေတွက်မှု မပြီးပြတ်သေးသည့်မြို့နယ်ကော်မရှင်ရုံးများတွင် မဲရုံပိတ်သိမ်းအပြီး ၁၂ နာရီအကြာနိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့ မနက် လေးနာရီတွင် မဲရေတွက်မှုကို ခေတ္တရပ်နားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပါတီမဲရုံ ကိုယ်စားလှယ်များက နံနက်လေးနာရီခန့်တွင် The Voice Weekly သို့ပြောကြား။ မဲရေတွက်မှုကို နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီတွင် ပြန်လည်စတင်မည် ....(၆၆)NDF candidates confident of victory in Lanmadaw(၆၅)(RNDP ပါတီ) ရခိုင်ပြည်နယ် မင်းပြား၊ ပေါက်တော၊ ကျောက်တော်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ရသေ့တောင်၊ မြောက်ဦးမြို့နယ်များရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်များတွင် အနိုင်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း နိုဝင်ဘာ၈ ရက် နံနက်တစ်နာရီခန့်တွင် သိရ၊ စစ်တွေမြို့နယ်တွင် ဆန္ဒမဲ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ရေတွက်ပြီးနေချိန်၌ အနိုင်ရရှိနေကြောင်း သိရ ....(၆၄)မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်တစ်ခုလုံးတွင် NDF ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အောင်ပွဲခံဟု သိရ၊ ဒေါက်တာသန်းဝင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ရန်ကုန်တိုင်း အမျိုးသားလွှတ်တော် အမှတ်(၁) အတွက်ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည်၊ တိုင်းဒေသကြီး နှစ်နေရာအတွက်ဦးသက်ထွန်းမောင်နှင့် ဦးအောင်ဆန်းဝင်းတို့ အရွေးခံရဟုသိရ ....(၆၃)မြောက်ဥက္ကလာပမှာ NDF က ဒေါက်တာသန်းဝင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက် အရွေးခံရသတင်း ကျိန်းသေသလောက်ရှိ။ (၉၀နဲ့ ၂၀၁၀ နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက် အရွေးခံရသူ ... )(၆၂)ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ဦးအုန်းမြင့် အနိုင်ရ ...(၆၁)ရန်ကုန်တိုင်း အလုံမြို့နယ်တွင် NDF မှ ဦးခင်မောင်ရီ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နေရာအတွက် အနိုင်ရရှိမှု သေချာပါပြီ ...(၆၀)မန္တလေးတိုင်း ပုသိမ်ကြီး မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက် NDF မှ ကိုကျော်စိုးထိုက် အခြေအနေကောင်းနေဟု သိရ ....(၅၉)တာမွေက ပြည်ခိုင်ဖြိုး မလဲ့လဲ့ဝင်းဆွေ ရှုံးနိမ့်နေဟုသိရ ...(၅၈)မန္တလေး မိုးကုတ်မှာ NDF အသားစီးရနေဟု သိရ ...(၅၇)မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၁၀နာရီခွဲ အခြေအနေအရ NDF ပြန်ကြားရေး အဆိုအရ ပုဇွန်တောင်မှာ NDF ကိုအောင်ဇင်က ပြည်ခိုင်ဖြိုး ဦးတင်ထွန်းဦးအပေါ် အနိုင်ရ ....(၅၆)ပုဇွန်တောင် မဲစာရင်း အငြင်းပွားနေဆဲ ပြည်ခိုင်ဖြိုး တင်ထွန်းဦးနဲ့ NDF ကိုအောင်ဇင် ဘယ်သူနိုင်မှန်း မသေချာသေး၊ ဒဂုံမှာတော့ NDF က ဦးသာမြင့်ထူး အခြေအနေ မကောင်း ...(၅၅)မန္တလေး အောင်မြေသာဇံတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အတွက် ဦးကျော်အောင်၊ချမ်းအေးသာဇံတွင်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဦးခင်မောင်သက် နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက် ဒေါက်တာ လှစိုးညွန့် NDFတို့ အနိုင်ရရှိပါသည် ...(၅၄)ဗဟန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် နေရာအတွက် NDF မှ ဦးအောင်မြတ်ထွန်း အနိုင်ရရှိပါသည်..(၅၃)ပုဇွန်တောင်မှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ဦးတင်ထွန်းဦး နိုင်သွား ...(၅၂)စမ်းချောင်းမှာ NDF မှ ဦးစိုးဝင်း အနိုင်ရရှိသတင်း သေချာပါပြီ ...(၅၁)်ကျောက်မဲမြို့နယ်အတွက် ကျားဖြူပါတီမှ ဦးစိုင်းဆောင်ဆီ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၄ တွင် ဦးစိုင်းသန့်ဇင်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် အမှတ် ၁ အတွက်ဦးစိုင်းခမ်းကျော်နှင့် အမှတ် ၂ တွင် ဦးစိုင်းသန်းမောင်တို့ အနိုင်ရ ...(၅၀)ရှမ်းပြည်နယ် မူဆယ်မှာ ကျားဖြူပါတီက ဦးစိုင်းဖုန်းမြတ် အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက် အနိုင်ရ ...(၄၉)သိန္ဒီမြို့ပြည်နယ်လွှတ်တော်၌လည်း SNDP ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်းက အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း SNDP က ပြောပါတယ် ...(၄၈)စမ်းချောင်း(တောင်) မဲရုံ (1) (2) (3) တွင် NDF ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးဝင်းနှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသောင်းထွန်းမဲများစွာပင်အနိုင်ရရှိ စမ်းချောင်းမြို့နယ်အားလုံး ဆက်လျှက်ရေတွက်နေသည်။9နာ၇ီ မဲရုံ (3) ရုံပေါင်း စာရင်း အရ ...(၄၇)မင်္ဂလာတောင်ညွန့်နောက်ဆုံးရသတင်းကတော့ မဲရုံ ၂၁ရုံရဲ့အဖြေအရ ဦးအောင်ကြည်က ဦးသုဝေကို မဲ၇၀၀ကျော်အသာရနေပါတယ် ၁၅ရုံမှာ ၁၄ရုံအသာရပေမယ့် အစိုးရ၀န်ထမ်းအနေများတဲ့ဥပမာ စည်ပင်ဝန်းမီးရထားလှိုင်လို ၆ရုံပေါင်းလိုက်ရင် မဲဟာဦးအောင်ကြည်က တော်တော်သာသွားနိုင်၊ ဆက် ရေတွက်နေဆဲ ...(၄၆)ဦးအောင်ခင်(NDF) ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် အနိုင်ရ ...(၄၅)ဒေါက်တာ တင်ရွှေ (NDF) ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၆)၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် အနိုင်ရ ...(၄၄)သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် မဲစာရင်းတွင် NDF က အခြေအနေ ကောင်းနေ...(၄၃)ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ဦးသူရရွှေမန်း ဇေယျာသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်ခရိုင်ပြည်သူ့လွှတ်တော် တွင် ဦးမြင့်လှိုင်ဒက္ခဏသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်ခရိုင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် နေရာတို့တွင် နိုင်သွား ...(၄၂)ကယားပြည်နယ်မှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးမှ ဆက်တိုက် အနိုင်ရနေ ...(၄၁)မြောက်ဥက္ကလာပတွင် လွှတ်တော် ၃ ခုစလုံးအတွက် NDF မှအနိုင်ရရှိရန်သေချာသလောက်ရှိတယ်လို့NDF မှ ဦးသက်ထွန်းမောင်ထံ မှသိရှိရ ...(၄၀)Dr. Tin Shwe (NDF) is winning Hlaing senate as far ascounted(၃၉)မြစ်ကြီးနား ဧရာရပ်ကွက် မဲရုံအမှတ် (၁၄)တွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးမှ ဦးသိန်းဇော် (၅၉၆)မဲ၊ NDF မှ ဦးမာခါး (၂၀၆)မဲ၊ တစည (၉၆) မဲ၊ ကျားဖြူ (၄၁) မဲ၊ ပယ်မဲ (၃၄) မဲ ရရှိခဲ့နေ ...(၃၈)ရှမ်းပြည်နယ် လားရှိုးတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုး အနိုင်ရ ...(၃၇)NDF senate U Kyi Myint (La Tha) wins(၃၆)ရွှေပြည်သာမှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နေရာအတွက် ပြည်ခိုင်ဖြိုးမှ ဦးတင်မောင်ဦး နိုင်သွားပြီတဲ့ ...(၃၅)SNDP win in3townships in LIn Hke(၃၄)မြောက်ဦးမှာ မဲရုံ ၄၇ရေပြီးတဲ့အချိန်မှာ ရခိုင်ပါတီ ၁၈၀၀၀ ကျော်ရနေပြီး ကြံ့ခိုင်ရေးက ၃၀၀၀ ကျော်ရပါတယ်တဲ့(၃၃)ပုလဲမြို့သစ်မှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးမှ ဦးကျော်ဆန်း အနိုင်ရ....(၃၁)NDF win in4quarter, Latha in Mae Yone 1, 2,3for Amyotha (U Kyi Myint) and Pyithu (U Tin Shwe) Hlttaw.(၃၀)Taung ngu house USDP U Aung Min land slide winning(၂၉) (မန္တလေးတိုင်း သတင်း)NDF -- Aung Myay Thar Zan house + senate - U Tin Aung,U Kyaw Aung , Maharaung myay senate - Dr Hla Soe NyuntWins(၂၈)စစ်တွေ ကျေးပင်ကြီးရပ်ကွက်တွက် ရတပ ပါတီမှ ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်အမတ် ဆရာမောင်ညိုက ၆၆၈ မဲဖြင့် အနိုင်ရ။ ရူပတောင်တွင်လည်း နေရာ ၃ခုစလုံးကို ရတပ ပါတီကအနိုင်ရရှိ။ ( ညနေ ၅ နာရီတိတိ)(၂၇)မင်္ဂတောင်ညွန့်မြို့နယ်တွင် ဦးသုဝေက ဦးအောင်ကြည်ကို မဲရုံ၁၅ရုံတွင် ၁၄ရုံ အနိုင်ရရှိထားပါတယ်(၂၆)ကမာရွတ်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း(NDF) ကျော်မင်းလှိုင် မဲ ၇၀၀ ကျော်ဖြင့် ပြန်လည်ဦးဆောင်ရေတွက်ရန် မဲရုံတစ်ရုံ ကျန်သေး အနိုင်ရဖွယ်ရှိ။(၂၅)U Thar Myint Htoo (NDF) wins Da gon house(၂၄)UDP Union Tarmwe House U Thein Tin Aung Wins(၂၃)NDF house Kyaut tan township U Kyi Than Wins(၂၂)တောင်ဥက္ကလာမှာ ဦးအောင်သိန်းလင်း နိုင်တာ ကျိန်းသေသွားပြီ(၂၁)NDF starts winning in one poll station Moe-gote(၂၀)Da gon tsp, U Thar Myint Htoo (NDF) win(၁၉)U Thant Zin (NDF) wins at Nawaday housing,Hlaing Thar Yar Township(၁၈)Senate 11, Yangon is going to be won by NDF !!!(၁၇)USDP General Secretary U Htay Oo wins landslidein Hin Tha Da township(၁၆)U Khin Shwe (USDP) won Yangon Senate(၁၅)NDF is leading in Yan Kin(၁၄)North Dagon, 28 quarter, Daw Tin Nwe Oo (NDF) won with 346 votes(၁၃)NDF won in Ba-han (confirmed)(၁၂)South Dagon, U Kyaw Zayar Win is winning (NDF)(၁၁)Kamaryut House - Kyaw Min Hlaing Wins (NDF)(၁၀)တောင်ဥက္ကလာမှာ လောလောဆယ် ရေတွက်ပြီးသမျှ ဦးအောင်သိန်းလင်း နိုင်နေတယ်လို့ ကြား(၉)U Aung Zin (NDF) wins in Pazundaung(၈)ah-lone House has been won by U Khine Maung Ye(NDF)(၇)Sis-twe, Min-pya, RNDP won5townships/5seats(၆)Pazundaung, (1) Quarter, poll-station no.5, pyi thu hlut taw, NDF - 143, USDP - 73, other - 33, ah-myo-thar hlut taw, NDF 149, USDP 57, other 30(၅)U Soe Win (NDF) wins Sanchaung Pyi Thu Hluttaw(၄)South Okapalapa: Daw Kan Khant Dane (NDF) won over U Aung Thein Lin with 197/183 at one poll-station, U Aung Thein Lin won over Daw Kan Khant Dane (NDF) with 199/212 at another one. kan kam dane wins in one polling station but Aung Thein Linn wins in one polling station we are excitingly waiting.(၃)Dr. Myat Nyana Soe (NDF) won in Yangon Senate - No.4(၂)NDF candidate U Khin Maung Win has won at Pyi-thu-hlut taw in Lan-ma-daw poll-station 2(၁)ရန်ကုန်တိုင်း ပုဇွန်တောင် မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲစာရင်းများ ရေတွက်ပြီးပြီ၊ NDF က အနိုင်ရသွားကြောင်း။အနိုင်ရ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည် စာရင်း http://www.4shared.com/audio/8njj7wGO/118_2010.html အနိုင်ရ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည် စာရင်း http://www.4shared.com/audio/VzGRF9Or/121_2010.html အနိုင်ရ အမျိုးသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည် စာရင်း http://www.4shared.com/audio/V1-EPWfe/119_2010.html အနိုင်ရ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် (သို့) ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည် စာရင်း http://www.4shared.com/audio/5TXBR8Ke/120_2010.html
အနိုင်ရ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည် စာရင်း (ရေတွက်ဆ...